NMR, Optics Experiment, Young's Modulus - Ọrụ
Igwe ọkụ & Igwe
Akụrụngwa Mmụta Gbasara Anya
F-29 Ihe omuma ihe omuma
TJ270-30A Dual Doo Infrared Spectrophotometer
LCP-3 Optics Kit Kit - Nlele Nlereanya
LIT-6 nkenke Interferometer
LPT-6 Nha nke Photoelectric Characterist ...
LADP-10 ngwa nke Franck-Hertz Experiment ...
LGS-2 Nyocha CCD Spectrometer
Tianjin Labour Scientific ngwá Co., Ltd. Ọ dị na Tianjin Innovation Industrial Park, Beijing Alaka nke Chinese Academy of Sciences na mpaghara ngosipụta ọhụụ ọhụrụ nke mba. Ogige ntụrụndụ nke Tianjin nke Alaka Beijing nke Chinese Academy of Sciences bụ ihe dị mkpa nke CAS na-azaghachi nke ọma na atụmatụ atụmatụ mba niile nke "mmepe nke Beijing, Tianjin na Hebei" nke Kọmitii Kọmitii CPC nyere.
Gịnị bụ oru？
Hao ping ， onye bụbu minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ na China, na ndị minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ na mba ndị ọzọ bịara leta anyị. anyị mere ka anyị specializes na imewe R&D na ahịa sayensị ngwá ha, ha niile nwere nnọọ mmasị n'ebe anyị iwebata.
Nlekọta maka mmezi nke infrared s ...
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ na-ahụ maka gburugburu ebe obibi ejirila ọtụtụ iwu dị mma, nke nwere ike ịsị na ọ ga-akara mma. Uto nke ulo oru a bu otutu oge nke ...
Kpụrụ ọhụrụ maka mkpebi mmanụ na w ...
Ka a sịkwa ihe mere ọtụtụ mmadụ ji ekwu na ngwa ọrụ nchekwa gburugburu bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile, ma ọ bụ mmepụta ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndụ kwa ụbọchị. Nke a gbachiri "penetration" na-eweta ihe ent ...
308 ụlọ, F4 ụlọ, Nke 6 Huafeng ụzọ, Huaming elu-tech ulo oru mpaghara, Dongli district, Tianjin City